Proper njalo futhi ukwelashwa ngokucophelela - izimfihlo main ukuthi kuzosiza ukugcina izinwele impilo eside, ukubukeka kwabo enhle nobuhle. Ngokumangalisayo, ngensada amalungiselelo yesimanje yezimonyo senzelwe kwemikhiqizo yekhwalithi ephezulu izinwele ukunakekelwa, abambalwa kuphela izimali amayunithi kungenzeka ungeniswe icala eziyinkimbinkimbi ezifana, kungekho ingozi ukubeka umhlobiso yemvelo salowo nalowo muntu wesifazane okungathi sina. Ukuvimbela lokhu, kufanele siqaphelisise lezo zidakamizwa, okuyinto nathi sithemba ukuthi anakekele, ibala noma ukubuyisela impilo izinwele zethu.
Gcina izinwele enempilo - 7 Izinyathelo
Beautiful, uzilungise, izinwele enempilo kubalulekile, singasho ingxenye eyinhloko esithombeni. Uma izinwele ubukeka akunandaba, ungakwazi bayakhohlwa izimonyo amahle izingubo nice - konke lokhu iyoqashelwa ngokungabi bikho kwekhanda kucocekile. izinwele enempilo kungenziwa ngokuthi isici esivelele kunazo zonke, kodwa sigcine akulula usesimweni esifanele. Kuyadingeka hhayi kuphela ukuqeda izinwele kusukela unomphela chemical zokwelapha, kodwa ukuthambisa njalo moisturize kubo, ebanikeza ukunakekela kakhulu nsukuzonke.
Isinyathelo eyodwa: kufanele nekama ngokucophelela sivala yakho ngaphambi ukuzigeza. Kuyadingeka ukuba asuse efile izinhlayiya isikhumba, zanqwabelana uthuli nenye imfucuza, okuyinto evimbela ukugeleza kwegazi kuya follicle izinwele.
Isinyathelo Sesibili: eziyisisekelo izimfihlo izinwele enempilo amanga ekukhetheni ikamu lesifanele. Kunoma yikuphi akufanele bavunyelwe ukuba anakekele yemvelo umcebo emabhulashini zabo bristles eyenziwe ngepulasitiki. Kuyinto kangcono le njongo ibhulashi oyindilinga (kungaba flat) ukuma, ukuba kwesilo 'kanzima "nemvelo kanye bristles yemvelo - ngokuba izinwele owomile noma ububanzi ibhulashi flat, ifakwe iraba bristles amakhanda - I-ezimanzi.
Isinyathelo ezintathu: ngaphambi yokudweba ekhanda futhi izinwele kufanele ivikeleke. Ukuze zombala akazange abangele umonakalo ongalungiseki sivala, amathiphu kufanele moisturize.
Isinyathelo sesine: izinwele enempilo kakhulu othanda, lapho siye kubo ukusikiwa. Iinhluthu zethu enyangeni sikhule ngomunye sentimutha, kancane kancane thinned, futhi ekuvezweni ingozi kwesigaba kuyadamba. Ngakho-ke ukugunda izinwele nyangazonke ukwazi ukubuyisela izinwele impilo, elingenazo izinkinga nge emuva sakhe futhi libonakala kakhulu.
Isinyathelo sesihlanu: ne imicu ezimanzi kufanele sisingathwe ngokucophelela okukhulu ukuze izinwele enempilo akuyona ngaphansi usongo zokugwema ukuphuka nokulahlekelwa. Ukuze ecwaninga kubalulekile ukusebenzisa ofanele ikamu, ikamu futhi ibhulashi ukusebenzisa kuphela emva omiswe kokugcina. Ungenciki impilo izinwele, uma namanje ngempela ezimanzi, ikamu ezenziwe ngokjuni, ukuze babe microcracks, owabangela umonakalo elisemqoka kuya ekhanda.
Isinyathelo sesithupha: Indlela engcono ukuze ome izinwele - izinwele ionic dryer-umshanelo. idivayisi okunjalo kudambisa izinto kokulimaza izinwele isakhiwo, futhi ukusheshisa wokuqhekeka zishintshe amanzi. Ngaphezu kwakho konke, lokhu dryer izinwele kunciphisa omiswe isikhathi kakhulu.
Isinyathelo sesikhombisa: umlomo wombhobho dryer abangane best of imihlobiso zabesifazane zemvelo. Imibhobho esemzimbeni vumela ngokulinganayo ukusabalalisa emoyeni esishisayo, lokukhulunywa ngako kulendzaba akusho ome isikhumba aliholeli esigabeni ithiphu.
izinwele enempilo - umphumela umsebenzi nsuku zonke
Ukuze ugcine izinwele zethu enempilo futhi enhle, udinga nsuku zonke ukuze enze ezinye umzamo ke. Nsuku zonke kudingeka alwe izingozi eziningi: ukugwema okuqukethwe amanoni ekhanda futhi yonke izinwele, imoto kuyadingeka ukuze ungeze namafutha amancane abalulekile - menthol, Mint noma ezisawolintshi, okuyinto kunomphumela eqabulayo nokujabulela ukuthi izinwele enempilo akuyona Sears ayikwazi wageza Ngokuvamile, imoto kuyadingeka kufanele kube soft.
Ukuphefumula uma uhamba-kodwa ngabe kuyadingeka yini ukwelapha?